Xian, ichitenderera guta reChinese rematiracotta varwi | Kufamba Nhau
Xian, achishanyira guta reChinese remasirotota emhare
MaWarriors eXian ndiwo anonyanya kukwezva vashanyi veguta reChina revagari vanopfuura mamirioni matanhatu vanogara kuchamhembe kwenyika, padyo nemuganhu neMongolia. Nekudaro, guta rino rine zvinokwezva kupfuura kuziva pakati pezvivakwa, zviyeuchidzo, madziro kana nzvimbo inoyevedza yeMuslim.
Tevere, isu tinofamba mumigwagwa yeXian kuti tizive zvishoma zvirinani iyo nyika yeanozivikanwa masitetra mauto eFar East. Unogona here kuenda nesu?
1 Iko Xian iri kupi?
2 Xian nzvimbo dzinokwezva
2.1 MaWarriors eXian
2.1.1 Qin Shi Huang aive ani?
2.1.2 Ndeipi nzvimbo yekuchera matongo yakaita?
3 Chikamu cheMuslim cheXian
4 Zvimwe zvinoonekwa zveXian
Iko Xian iri kupi?
Xian ndiro guta guru redunhu reShaxi. Iri kuchamhembe kweChina, padhuze nemuganhu neMongolia, uye iri rimwe remaguta ekare uye ane nhoroondo kwazvo munyika. Uye zvakare, inofungidzirwa semugumo wekumabvazuva kweiyo yakakurumbira Silk Road, imwe yenzira dzebhizimusi dzakabatikana kwazvo pasi rino.
Xian nzvimbo dzinokwezva
Ichi ndicho chinonyanya kukwezva vashanyi uye iri bhazi reawa kubva kuXian. Iyo Mausoleum yaEmperor Qin Shi Huang ndiyo huru kuwanikwa kwazvino nguva. Sezvinowanzoitika, kuwanikwa kwakaitika zvisina tsarukano muna1974 apo vamwe varimi vakagumburwa neyakavakirwa chivakwa chine varwi vachiedza kuvaka tsime.
Kubva panguva iyoyo vanochera matongo vakawanza huwandu hunopfuura zviuru zvitanhatu, ese akasiyana kubva kune mumwe, kubva pane inofungidzirwa zviuru zvisere. Asi iyo Terracotta Mauto inongova chete tip yeiyo iceberg yezvakanyatsovanzwa pasi pevhu.
MuMausoleum yaMambo Qin Shi Huang kuchine hupfumi hwakawanda hunowanikwa, uhwo hwakaramba hwakasimba kwemakore anodarika zviuru zviviri nemazana maviri mukati memupiramidhi yenhurikidzwa nhatu, 2.200-mita-kukwirira, yakafukidzwa nepasi uye yakachengetedzwa nehurongwa hwakaoma. drainage uye nemisungo yaigona kudzivirira kupinda kwayo kune yakachena Indiana Jones maitiro.
Ngazvive sezvazvingaite, hurumende haidi kutora chero njodzi uye inosarudza kumirira iyo chaiyo nguva yekuongorora piramidhi neQin palace apo tekinoroji iri kumberi.
Qin Shi Huang aive ani?
Emperor Qin Shi Huang ndiye wekutanga kubatanidza mutongi weChina uye mutungamiriri mukuvakwa kwemadziro ekutanga. Nekuda kwehunyanzvi hwake hwemauto, akakwanisa kubatanidza umambo hwakakomberedza kudzamara abatanidza nyika makore akapoteredza 221 BC.
Emperor akafa makore akazotevera, muna 210 BC, vachiri parwendo kuburikidza nekumaodzanyemba kwenyika, vanoti kutsvaga hupenyu husingaperi muzvitsuwa zvine mukurumbira zveVasingafi.
Kunyangwe kwaive kwekutya kuti vavengi vake vaizoda kutsiva kwaari muhupenyu hwapashure kana nekuda kwemegalomania yake, chokwadi ndechekuti akaraira kuvakwa kwemakuva makuru aizonyora simba rake pasi.
Ndeipi nzvimbo yekuchera matongo yakaita?
Nzvimbo yekuchera matongo yakakomberedzwa nemakomo uye yakakamurwa kuita nzvimbo nhatu. Panguva yekutanga kushanya, zvakakosha kutanga kuvaona pane yekupedzisira enclave (yakanyanya kurova) uye kukwira kumusoro kusvikira iwe wapedzisa mune yekutanga kunowanikwa varwi vematombo, vamwe vakavakwazve uye vamwe vakabvarurwa kuita zvidimbu pasi .
Aya mauto anopa pfungwa yehukuru hwenzvimbo uye hupamhi hwevanhu hwakatsanangura China kubvira kare. Zvakare kucherechedzwa inyaya yekuti wega murwi weXian ane yake yega physiognomy uye zvakasarudzika zvemukati mune zvipfeko zvake uye poses.
Pakati pezvakacherwa pane nzvimbo yekushanya yezvitoro neresitorendi yekupedza zuva raunogona kutenga marudzi ese ezvikafu zvinokurumidza uye nezviyeuchidzo. Asi kana uchingova nezuva rimwe chete kuti urishanyire, zvirinani kudzoka utore nguva yacho uine dzimwe nzira.
Chikamu cheMuslim cheXian
Yakakura Mosque yeXian
Yakazara nematumba uye matanga, kuti uidye zvakakodzera kushanyira inoyevedza Muslim kota yeXian. Ikoko iwe unogona kuravira zvinonaka zvakadai semabhora akazadzwa nenyama kana miriwo, Yang Rou Pao Mo (hwai muto muto nezvidimbu zvechingwa), Liangpi (inotonhorera noodles) kana kabobs (nyama skewers). Chimwe chezvinhu chinokwezva kutarisisa zvakanyanya maererano neXian gastronomy munzvimbo ino ndechekuti iwe unogona kuyedza chaiwo madhishi echikafu cheMuslim asi nemutauro wechiChinese.
Islam yakavambwa mudunhu makore anodarika chiuru apfuura asi maitiro ayo akabvumidzwa kubva muna 651 AD uye nanhasi vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu verudzi rwechiHui vanogara pano. Iyo Great Mosque yeXian ndiyo hombe kwazvo munyika uye inopa yakanyanya kujeka mapurani, iri musanganiswa weChinese neIslam yekuvaka. Mukati meGreat Mosque tinowana mavanze mana aine musanganiswa wezvivakwa nenzvimbo dzebindu. Muchivanze chechitatu chimiro chemunamato chinowanikwa uye mune chechina, chikuru chemakamuri anokwanisa kugara kusvika kune chiuru chevanhu.
Zvimwe zvinoonekwa zveXian
Chimwe chezvivakwa zvine mukurumbira muXian ndeyeBell Tower, chivakwa chakaita mativi chakafukidzwa nedenga reChinese. Zvinoenderana nengano, mabhero ari mune iyi shongwe akagadzirwa kutyisa dhiragoni.
Zvimwe zvinonakidza zviyeuchidzo iDrum Tower (inovambira muzana ramakore rechi XNUMX uye ine madhiramu mukati) uye Great Wild Goose Pagoda inomira padyo neTembere yeMaternal Nyasha.
Hatigone kukanganwa rusvingo runokomberedza rwakakomberedza Xian, yakanyanya kuchengetedzwa muChina yese iyo yakavakwa muzana ramakore rechiXNUMX pamusoro peimwe yapfuura. Iyo yakakomberedzwa nemugero uye inopomedzerwa neparapeti uye shongwe. Iine hurefu hunosvika pamamita gumi nemaviri saka ine maonero anoyevedza uye ndiyo hombe iriko mukati meChina China.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Asia kufamba » China » Xian, achishanyira guta reChinese remasirotota emhare
Sancerre, rudo rwekubva kuParis
Kubva kuSeville kuenda kuRome, kuenda nekudzoka, kwema 169 euros chete. Chibvumirano chakadii!